बैंकिङ – Pahilo Page
Monday January 22, 2018 |
महिलाहरु भान्साबाट सडकमा, ‘काली’ बन्ने चेतावनी
यस्ता एजेण्डामा छलफल गर्दै एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड
२२ बुँदे घोषणपत्र जारी गर्दै सकियो अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशीक सम्मेलन (घोषणापत्र सहित)
चोरी गर्ने बालक समान सहित सार्बजनिक
फागुनको तेस्रो साताभित्र वाम नेतृत्वको सरकार गठन : खनाल
पढ्ने बानी बसाल्न यस्तो गर्नुस्
गएराति चक्कु प्रहार गरी एकको हत्या
निर्वाचन आयोगद्वारा पाँच दललाई छलफलका लागि बोलाइयो
धुमधामसँग मनाइयो प्रतिष्ठा एकेडेमीको १० औं वार्षिकोत्सव
प्रतिष्ठा एकेडेमीको १० औं वार्षिकोत्सव
सिटिजन्स बैंकले निःशुल्क अनलाइन आस्वा सेवा प्रदान गर्ने
काठमाडौ । सिटिजन्स बंंैक इन्टरनेसनल लिमिटेडले धितोपत्रको दरखास्त लिने प्रक्रियालाई अझ सरल, प्रभावकारी एवं सहज बनाएको छ । त्यसका लागि अनलाइनमार्फत दरखास्त दिन सकिने सेवा सुरु गरेको बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस सेवाअन्तर्गत आगामी दिनहरुमा निष्काशन हुने आइपीओ÷एफपीओको अनलाइन दरखास्त दिन इच्छुक लगानीकर्ताले घरमै बसीबसी निः शुल्क दरखास्त
सिटिजन्स बैंकले हकप्रद शेयरको बिक्री खुल्ला गर्ने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि.ले १०ः२.५ (दश बराबर २ दशमलब पाँच) को हकप्रद शेयरको बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको दशौं वार्षिक साधारण सभाबाट भएको निर्णय बमोजिम उक्त हकप्रद शेयरको बिक्री खुल्ला गर्न लागिएको बैंकका प्रवक्ता गणेशराज पोख्रेलले जनाएका छन् । साधारण सभाबाट भएको निर्णय
सिटिजन्स बैंकको ५ वर्षे मुद्दति योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडकले ग्राहकवर्गहरुको हितलाई ध्यानमा राखि २०७३ साल फाल्गुन ४ गतेदेखि लागु हुनेगरी बैंकको सम्पूर्ण बचत खाताहरुमा १ प्रतिशतका दरले ब्याज बृद्धि गरेको छ । बैंकले आफ्नो बचत खाताहरुको ब्याजदर न्यूनतम २ प्रतिशत र अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म हुने गरी व्याज दर कायम गरेको छ । बैंकका
सिटिजन्स बैंकको मुद्धति निक्षेपमा ९.५ प्रतिशत ब्याज
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले वर्तमान पूँजी बजारलाई ध्यानमा राखी र्र्र्वािर्षक ९.५५ ब्याज प्रदान गर्ने गरी १ सय ८० दिने मुद्धति निक्षेप योजाना ल्याएको छ । उक्त मुद्धति निक्षेप ग्राहकवर्गले यस बैंकको कुनै पनि शाखाबाट खाता खोल्न सक्ने छन् । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आस्वाको सदस्यता प्राप्त गरी माघ
सिटिजन्स बैंकका दुई एटिएमसहित १ शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो महाबौद्ध र मानभवनका शाखाहरुबाट एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै देशका विभिन्न दुर्गमस्थलका बासिन्दाहरुलाई सर्वसुलभ तथा अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ यु.के. एडको लगानीमा संचालित सक्षम– एक्सेस टु फाइनान्स कार्यक्रमको सहकार्यमा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुमा शाखारहित बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत वित्तीय पहुँच पु¥याउनको
सिटिजन्स बैंकद्वारा प्रिमियर फिनान्स प्राप्तिपछि एकीकृत कारोबार शुरु
दाङ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७३ असार २० गते र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको २०७३ असार २४ गतेको स्वीकृतिको अधिनमा रही साउन २ गते आइतवारको दिनबाट सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसन लि. ले. प्रिमियर फिनान्स कम्पनी लि लाई प्राप्ति (Acquisition) गरी एकीकृत कारोबार शुरु गरेको छ । यसअघि बैंकले नेपाल हाउजिंग एण्ड मर्चेन्ट
स्मार्टफोन बारेका १० मान्यता, जुन गलत हुन् तर सहीजस्तो लाग्छ
स्मार्टफोनको ब्याट्री, क्यामरा, प्रोसेसर तथा एप्स लगायतका बारेमा कैयन् मान्यता तथा भनाइ वा आम बुझाइ रहेका छन् । जसलाई हामी जान अन्जानमा सत्य ठानेका हुन्छौँ । यद्यपि यी भनाइहरु वास्तवमा सत्य हुँदैनन् । हामीले सही ठानेका तर वास्तवमा सत्य नभएका स्मार्टफोन बारेका १० मिथक यस्ता छन्: · प्रोसेसरको क्षमता दोब्बरले
नेपालको जनसंख्या बराबर मोबाइल सिमकार्ड वितरण
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले मंसिरसम्म दुई करोड ७२ लाख ९१ हजार सिमकार्ड वितरण
२५ फागुन, काठमाडौं । नेपालको कुल जनसंख्या बराबर मोबाइल सिमकार्ड वितरण भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले मंसिरसम्म दुई करोड ७२ लाख ९१ हजार सिमकार्ड वितरण गरेका छन् । जबकी नेपालको जनसंख्या पनि करिव करिव यही हाराहारीमा छ । नेपालमा
‘अनटेस्ट’ प्लेट राख्ने १० ट्याक्सी नियन्त्रणमा, ५ हजार जरिवाना हुने
अनटेस्ट हटाउन यातायात विभाग सक्रिय
३ फागुन, काठमाडौं । यातायत व्यवस्था विभागले अनटेस्ट नम्बरप्लेट राखेर गुड्ने सवारीमाथि कारवाही सुरु गरेको छ । सोमबार मात्रै १० वटा साना चारपांग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको विभागले जानकारी दिएको छ । ति सबै सवारी ट्याक्सीका रूपमा प्रयाेग भइरहेकै अवस्थामा पक्राउ परेका हुन् । निर्देशक बसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा खटिएको अनुगमन टोलीले
अझै गुड्दैछन् राजधानीमा ‘ज्यानमारा’ थोत्रे गाडी
पुराना गाडीको ब्लु बुक नवीकरण नरोक्न मन्त्रालयको निर्देशन
१७ फागुन, काठमाडौं । गत फागुन ९ गते अपरान्ह महाराजगञ्जमा निकै विभत्स दुर्घटना भयो । विद्यार्थी बोकेको एक स्कुल बसले चकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान एमडी प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्युठान बिजुवार ७ का डा. संजीव सुवेदी र भारत बिहारका डा. सनि आनन्दलाई ठक्कर दियो । कान्ति बाल अस्पतालको पछाडिको सडक हुँदै बसुन्धरा
सिराहाको गोलबजारमा टिभिएसको शो-रुम
६ फागुन, काठमाडौं । टिभिएस मोटरसाइकलको नेपाली बिक्रेता शंकर ग्रुप सिराहाको गोल बजारमा शो-रुम खेलेको छ । जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दीपक कुमार अग्रवाल र माहाबिर अटोमोबिल्सका महेश शर्माले संयुक्त रुपमा शो-रुम उदघाटन गरे । शो-रुममा टिभिएसका सम्पूर्ण बाइक तथा स्कुटरहरु बिक्रीमा राखिएको छ । अपाचे १६० सिसी, अपाचे १८० सिसी,
एक वर्षमा विनोद चौधरीको सम्पत्ती २० अर्बले घट्यो
१९ फागुन, काठमाडौं । नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सम्पत्ती पछिल्लो एक वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । चर्चित पत्रिका फोब्र्सले सार्वजनिक गरेको विश्वका अर्बपतिहरुको सूचीले यस्तो देखिएको हो । चौधरी समूहका अध्यक्ष चौधरीको कुल सम्पत्ती सन् २०१६ मार्च महिनामा १.१ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात एक खर्ब दश
१० उद्योगपतिको चाहनाः कांग्रेसमा कसले जितोस् ?
खुल्ला बजारनीति अंगाल्ने सक्षम युवा नेतृत्वको आग्रह
२१ फागुन, काठमाडौं । विहीबारदेखि राजधानीमा जारी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व आउला भन्ने चासो उद्योगी व्यवसायीहरुमा पनि देखिएको छ । अब कांग्रेसमा कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ ? कांग्रेसको भावी आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ? र, कस्ता मुद्दाहरुलाई अंगीकार गरेर कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ ? यसबारे अनलाइनखबरले १० जना उद्योगी व्यवसायीलाई सोधेको
२६ फागुन, मोरङ) । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले सरकारले सात प्रदेशमा औद्योगिक करिडोर सञ्चालन गर्ने बताउनुभएको छ । मोरङ व्यापार सङ्घले मङ्गलबार साँझ उद्योगमन्त्री पाण्डेको स्वागतमा विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले अब जग्गा खरिद गरेर उद्योग निर्माण गर्न समस्या हुने भएकाले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक एक हजार बिगाह जमिनको व्यवस्था
ग्लोबल आइएमई र भारतको एस बैंकबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
२६ फागुन, काठमाडौं । भाररतमा कार्यरत नेपालीहरुलाई सहज रुपमा रेमिट्यासन्स पठाउन ग्लोबल आइएमई बैंकले भारतको एस बैंकसँग रेमिट्यान्स कारोवार गर्ने उद्देश्यले सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । सम्झौतापत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञावाली र एस बैंकका ग्रुप प्रेसिडेन्ट अरुण अग्रवाल तथा सिनियर प्रेसिडेन्ट ऋतेश पाईले हस्ताक्षर गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र महामन्त्री सिंहद्वारा राष्ट्रियसभामा तालमेल गर्ने सहमति